ကြိုဆိုပါ၏ (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၂၀ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ
ကြိုဆိုပါ၏ (အင်္ဂလိပ်: Welcome ၊ ဟန်းဂု: 어서와) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂင်မြောင်ဆူ၊ ရှင်းယီအန်း နှင့် ဆိုးဂျီဟွန်းတို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အခြားအမည်မှာ ညောင်၊ လျှို့ဝှက်သောကောင်လေး (အင်္ဂလိပ်: Meow, the Secret Boy) ဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် နာဗာ ဝက်ဘ်တွန်းမှ ဂိုအာရာ၏ ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်နာမည်တူ ဝက်ဘ်တွန်းကို အခြေခံထားသည်။ ၎င်းကို KBS2 ရုပ်သံလိုင်းတွင် မတ် ၂၅၊ ၂၀၂၀ မှစ၍ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၂၀ အထိ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် ကြာသပတေးနေ့ ၂၂:၀၀ (KST) အချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော Lovely Horribly ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ စံချိန်ကို ချိုးခဲ့သည်။
၃၅ မိနစ်[မှတ်စု ၁]
မတ် ၂၅၊ ၂၀၂၀ (၂၀၂၀-၀၃-၂၅) – ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၂၀ (၂၀၂၀-၀၄-၃၀)
ဆိုအာသည် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဝက်ဘ်တွန်းရေးဆွဲသူတစ်ဦးဖြစ်ချင်သည့် အိပ်မက်ရှိသူဖြစ်သည်။ သူမ၌ ကြောင်များနှင့်ပတ်သက်၍ ချစ်-မုန်း ခံစားချက်ရှိသူဖြစ်သည်။
သို့သော် ဆိုအာ၏ ဘဝသည် အိမ်သို့ခေါ်လာသော ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားလာခဲ့သည်။ ကြောင်လေး၏ နာမည်မှာ ဟုန်းဂျိုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လူပုံစံပြောင်းနိုင်သည်။ ဟုန်းဂျိုသည် ဆိုအာအပေါ်နှစ်သက်သဘောကျလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် မိမိလူဖြစ်ကြောင်း ဆိုအာမသိနိုင်စေရန် အမျိုးမျိုးကြိုးပမ်းကာ ဖုံးကွယ်ထားခဲ့သည်။ ဟုန်းဂျိုသည် ဆိုအာ၏ အနားတွင်သာ နေနိုင်ရန်အတွက် သူမလိုအပ်သည့် အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင့် သက်သေပြခဲ့သည်။ ဟုန်းဂျိုသည် သူ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်လား။
ဟုန်းဂျို အဖြစ် ဂင်မြောင်ဆူ
ဟုန်းဂျို (ကြောင်အသွင်) အဖြစ် ဘယ်ဂီ
ဂင်ဆိုအာ အဖြစ် ရှင်းယီအန်း
လီဂျယ်ဆန်း အဖြစ် ဆိုးဂျီဟွန်း
အန်းဂျီအန်း အဖြစ် ယွန်းယီဂျို
ဂိုဒူရှစ် အဖြစ် ဂန်ဟွန်း
ဂန်ဆိုဖြောင်း အဖြစ် အန်းနေးဆန်း
ဘန်ရှီလ် အဖြစ် ဂျိုရွမ်း
ဆန်းဟွန်းဂျာ အဖြစ် ဂင်ယိုဂျင်
ဂိုမင်ဂျုံး အဖြစ် ဂျွန်ဘေးဆိုး
ပတ်စင်ဂျာ အဖြစ် ဂျွန်ယီဆိုး
ချာဆန်းကွန်း အဖြစ် ယန်းဒယ်ဟွတ်
လီဟေးယွန်း အဖြစ် ဂင်ယီဆိုးလ်
ချွိုင်ဒါဆန်း အဖြစ် လီယူဂျင်း
အဘွား အဖြစ် ချွိုင်မင်ဂန်
လီရူဘီ အဖြစ် ချွိုင်ဘယ်ယောင်း
ဘန်ဂုဘုံး အဖြစ် ယွန်းဂျီဟွန်း
ဒါဆန်း အဖြစ် ဆောင်းမင်ဂျယ်
နာဂျင်ဝန်း အဖြစ် ဂျိုဟွတ်ဂျွန်း
ဇာတ်လမ်းတွဲကို အစောပိုင်း၌ ပေါင်မုန့်ဖုတ်တဲ့ကောင်လေး (အင်္ဂလိပ်: Man Who Bakes Bread ၊ ဟန်းဂု: 식빵 굽는 남자) ဟု အမည်ပေးထားသည်။ မူလတွင် ၂၀၁၉ နှစ်ဝက်၌ tvN ရုပ်သံလိုင်းတွင် ထုတ်လွှင့်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး ယွတ်ဆန်းဂျယ်နှင့် ပတ်အန်းဘင်[မှတ်စု ၂]တို့ကို ဇာတ်ဆောင်များအဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် နှစ်ဦးစလုံးမှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ပထမဆုံးဇာတ်ညွှန်းဖတ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ တွင် ယိုအီဒို၊ တောင်ကိုရီးယားရှိ KBS Broadcasting Station တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဇယားထဲတွင် အပြာဖြင့်ဖော်ပြထားသောနံပါတ်များသည် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်များဖြစ်ပြီး အနီဖြင့်ဖော်ပြထားသောနံပါတ်များသည် အမြင့်ဆုံးအဆင့်များဖြစ်သည်။
မတ် ၂၅၊ ၂၀၂၀ ၃.၆%
မတ် ၂၆၊ ၂၀၂၀ ၁.၆%
ဧပြီ ၁၊ ၂၀၂၀ ၂.၇%
ဧပြီ ၂၊ ၂၀၂၀ ၁.၅%
ဧပြီ ၈၊ ၂၀၂၀ ၂.၀%
ဧပြီ ၉၊ ၂၀၂၀ ၁.၅%
ဧပြီ ၁၅ ၊ ၂၀၂၀ ၁.၈%
ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ၀.၉%
ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ၁.၈%
ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၂၀ ၁.၀%
ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၂၀ ၁.၄%
ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၂၀ ၀.၈%
↑ ၁.၀ ၁.၁ In order to circumvent Korean laws that prevent commercial breaks in the middle of an episode, what would previously have been aired as single 70 minute episodes are now being repackaged as two 35 minute episodes, with two episodes being shown each night withacommercial break between the two.
↑ Park became the female lead in the 2019–2020 SBS TV Friday-Saturday drama Hot Stove League, which was produced by the same production company behind Meow, the Secret Boy.
↑ Hi, Welcome [Title in the URL] (in ko)။ Korean Broadcasting System, Naver Corporation။ March 2, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Meow, the Secret Boy [Title in the URL] (in ko)။ Korean Broadcasting System။ March 2, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Drama viewers angry over commercial breaks"၊ The Korea Times၊ PressReader၊ May 16, 2017။ April 17, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Welcome / 어서와 Teaser။ YouTube (ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်)။ KBS World။ March 25, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Welcome (Official Website)။ KBS World။ March 25, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Welcome" Confirms Kim Myung-soo and Shin Ye-eun။ HanCinema (December 11, 2019)။ March 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ KBS '어서와' 0.9%…지상파 최초 0%대 드라마 '불명예'. MBN (in Korean).
↑ Meow the Secret Boy။ 10 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Ga-young (August 19, 2019)။ [단독 '홀로서기' 엘, 웹툰 원작 '어서와' 주인공 유력]။ Naver။ February 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim Myung-soo Confirms Role in KBS's "Welcome"။ HanCinema (August 26, 2019)။ March 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Jin-seok (September 4, 2019)။ [단독신예은, 김명수와 드라마 '어서와' 주인공]။ 30 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shin Ye-eun Confirms Starring Role in "Welcome"။ HanCinema (September 17, 2019)။ March 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Min-ji (October 21, 2019)။ '어서와' 서지훈 주연 낙점, 마성의 매력남으로 변신(공식)။ February 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Seo Ji-hoon to Star in "Welcome"။ HanCinema (October 21, 2019)။ March 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Jin-seok (March 18, 2019)။ [단독'식빵 굽는 남자' 육성재 불발… 다른 배우 논의]။ 22 February 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Myung-mi (December 31, 2019)။ '어서와' 첫 대본리딩 현장, 김명수-신예은-서지훈 호흡 어땠나။ February 22, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nielsen Korea (in ko)။ AGB Nielsen Media Research။ March 25, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ကြိုဆိုပါ၏ at the Internet Movie Database
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြိုဆိုပါ၏_(ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)&oldid=695657" မှ ရယူရန်
၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။